Ciidamada Uganda oo deeqo kala duwan gaadhsiiyey Barakacayaasha Muqdisho | Berberanews.com
Home WARARKA Ciidamada Uganda oo deeqo kala duwan gaadhsiiyey Barakacayaasha Muqdisho
Ciidamada Uganda oo deeqo kala duwan gaadhsiiyey Barakacayaasha Muqdisho
Muqdisho-(Berberanews)- Ciidamada dawladda Uganda ee ku sugan dalka Soomaaliya oo maanta u dabbaal-degaya sannad-guuradii 31-aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay ayaa gargaar kala duwan u fidiyay barakacayaasha ku jira kaamamka Muqdisho qaarkood, gargaarkaas oo isugu jiray biyo la cabbo, dawooyin iyo maryaha-kaneecada laga hoos-galo.
Tarehe Sita oo loo yaqaano lixda bisha February 1981-kii oo loo dabaal-degayo weerarkii ugu horeeyay ciidamada dawladda uu hogaaminayay Yoweri Museveni ay ku qaadeen ciidamada iska caabinta ee Qaranka (NRA) kaasoo sababay xoreynta Uganda 26-kii January 1986 “Sannadkan, hawlaha ciidamada AMISOM ee ka hawlgala Soomaaliya ay qabaneyso ayaa muhiim ka dhigaya cawinadan. Midnimada gobolka dhinaca ammaanka si loo helo horumarka iyo xasiloonida gobolka. Ayuu yidhi Paul Lokech oo ah taliyaha ciidanka Uganda.
Mr. Lokech oo ka hadlayay kaam lagu magacaabo Neero oo ka mid ah kaamamkii ay gargaarka ka bixiyeen ayaa sheegay in ciidamada Uganda ay ka go’an tahay inay xasillooni ku soo celiyaan dalka Soomaaliya oo dhan “Innagoo dabaaldag ku jirna, AMISOM waxay u muujineysaa ciidamada DKMG ah muhimadda ay leedahay in xoogga la saaro ilaalinta iyo helidda ammaanka shacabka Soomaaliyeed. Taasi ayaa xudun u ah kasbashada taageerada dadka ay malleeshiyaadka Al-shabab dhufsanayso”.
Sarkaalka ciidamada rayidka ah ee AMISOM, Col. Katwekyeire Kamurari ayaa xusay in ciidamada AMISOM ay qaybiyeen 2000 oo maro-kaneeco ah iyo 100,000 oo liitar oo biyo la cabo ah. AMISOM waxay kaloo sameysay daaweyn guud oo ay u fidiyeen dadka ku jiray xerooyinka. Sidoo kale waxay qaybiyeen cunno nafaqo leh taasoo ay siiyeen carruurta da’adooda ay ka yar tahay shan jirka “Hawlaha noocaan ah waxay ka saacidayaan AMISOM inay cusbooneysiiso xidhiidhka ay la leedahay ummadda Soomaaliyeed. Waxaan u mahadcelin u jeedinaynaa ciidamada Uganda sida ay hormuudka u noqdeen, isla markaana waxaan ka codsanaynaa ciidamada DKMG inay qaataan dhaqankaas si ay u kordhiyaan xidhiidhka ay la leeyihiin dadka Soomaaliyeed.”
Ciidamada AMISOM oo tiradoodu tahay 10,000 oo askari oo ka socda dalalka Burundi, Jabuuti iyo Uganda ayaa waxay Uganda ahayd dawladdii ugu horreysay ee billowda howlgalka iyagoo Muqdisho ka howlgalay bishii March ee sannadkii 2007.
Previous article“Waxaan ku calinayaa in Somaliland iyo dawladdeedu ay diyaar u tahay Gogoshadii aannu waligayo u fidinaynay Walaalayaga gobollada Bariga….” Madaxweyne Siilaanyo
Next articleGo’aan ka soo baxay Shir lagaga hadlay arrimaha Soomaaliya oo kooxda xidhiidhka caalamiga ah uga socday Jabuuti